admin – Heal Zimbabwe
Heal Zimbabwe joins the rest of the world in commemorating International Women’s Day. The commemorations for this year are running under the theme “I am Generation Equality: Realizing Women’s [...]
Since time immemorial, CBOs have played a very significant role in the development of rural communities in Zimbabwe. They have been deeply involved in activities that have impacted on the [...]
Heal Zimbabwe is dismayed by the denial to remove Heal Zimbabwe Executive Director, Rashid Mahiya from routine remand. Mahiya was in February 2019 charged with plotting to overthrow President [...]
Heal Zimbabwe is gravely concerned by the escalation of cases of violence involving machete killings by artisan miners across the country. During the festive season, there were reports of one [...]
Cognizant that the year 2019 was characterized by numerous challenges ranging from economic collapse to blatant human rights violations, Heal Zimbabwe wishes all citizens a happy festive season [...]
Heal Zimbabwe joins the rest of the world in commemorating International Human Rights Day, a day that is observed every year on the 10th of December. The day is historic in that it is the day [...]